Oro Agri Europe - Siansa ampiasain'ny natiora
Safidio ny menio fitetezana
Vokatra amin'ny tany
Zezika / Zavamaniry
Torolàlana ho an'ny orinasa 2021
Torolàlana voaaro voaaro
Torolàlana momba ny valin'ny fitsapana ovy
Torolàlana momba ny fampiharana ny voankazo
Torolàlana momba ny valin'ny fitsapana ny voaloboka
Tetikasa R&D / Projetos de I&D
Detergent OSB-OXIDE sy Biocide
Fanaraha-maso Cleistothecia 2019
Fanaraha-maso Cleistothecia 2018
Vaovao / Gazety
Toerana fitsapana data
Ny iraka ataontsika dia ny hitondra tsy tapaka ny fiarovana ny zava-maniry sy ny tontolo iainana ary ny vahaolana mahomby amin'ny famokarana vokatra eny an-tsena.
Tetikasa iraisan'ny vondrona EU:
Famahanana an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fanavaozana
Izahay dia mamolavola vokatra azo antoka ho an'ny mpampiasa sy ny tontolo iainana ary manome vahaolana mahomby nefa residue maimaimpoana ho an'ny mpanjifanay.
Jereo ny vokatray
Miaraka amin'ny fomba fiasa tsy manam-paharoa sy ny fomba fampiharana marina ny vokatra ampiharintsika arak'ireo torolàlana farany natao hahomby kokoa, nefa azo antoka kokoa ho an'ny tontolo iainana. Raha te hahalala bebe kokoa dia tsidiho ny faritra FAQ anay.
Jereo ny Fizarana FAQ anay
Fanombanana ny fananana amin'ny fampiharana latsaka amin'ny formulate misy menaka manitra nalaina avy amin'ny citrus sinensis mba hampihenana ny fivoaran'ny erysiphe necator cleisthotecia
Jereo ny tetikasanay
Miaraka amin'ny ekipa mpanohana ny serivisy R&D sy teknika miorina any Eropa sy manerantany dia mitady vokatra vaovao foana izahay izay afaka manatsara ny vokatra ary maharitra amin'ny fahasalaman'ny vokatra.
Jereo ny horonantsarinay
Fampiasam-bola R&D Continuos
Mpanolotra voalohany ny fiarovana azo antoka, sariaka, fiarovana ny vokatra ary vahaolana amin'ny fanatsarana ny tsenan'ny fambolena sy ny mpanjifa manerantany izahay.
Oro Agri International Ltd (eo ambanin'ny marika ORO AGRI) dia mamolavola sy manamboatra vokatra misy patanty ho an'ny fambolena, trano ary indostrialy manerantany. Manokana ireo vokatra azo antoka ho an'ny mpampiasa sy ny tontolo iainana izahay ary hanome vahaolana mahomby nefa tsy misy residue ho an'ny mpanjifanay.
Powered ny siansa
Tohizo ny vaovao farany momba ny orinasanay sy ny vokatra azo antoka ho an'ny mpampiasa sy ny tontolo iainana ary manome vahaolana mandaitra nefa mbola mitoetra ho an'ny mpanjifanay.
Manokana ireo vokatra azo antoka ho an'ny mpampiasa sy ny tontolo iainana izahay ary hanome vahaolana mandaitra nefa mbola mitoetra ho an'ny mpanjifanay. Ireo sokajy vokatra dia misy adjuvants, fanafody famonoana bibikely, conditioner-tany or fahana foliar.
Ireo teknisianina eto an-tsaha dia mitarika fandalinana mahomby miaraka amin'ireo mpamboly eo an-toerana ary manampy ireo mpaninjara miaraka amina fotoam-panofanana hampianarana ny vondrom-pambolena momba ny fampiasana ny ORO AGRI vokatra isan-karazany.
Bibikely famonoana bibikely PREV-AM® rehetra-amin'ny-iray, famonoana holatra ary famonoana olona
Fampidirana OROGANIC ™
TRANSFORMER® Conditioner an'ny tany
Torolàlana ho an'ny bibikely sy bibikely mahasoa
ORO AGRI Mpiara-miasa
Ny fiaraha-miasa amin'ny fiaraha-miasa stratejika dia zava-dehibe amin'ny ahafahantsika manitatra ny vahaolana arosonay ho an'ireo mpamboly manerantany. Ireo mpiara-miasa miasa dia manome serivisy isan-karazany izay manampy anay hatrany hitondra vahaolana vaovao amin'ny tsena. Ireo serivisy ireo dia misy ny fanamarinana, fiofanana, fikarohana ary haino aman-jery. Manana mpiara-miasa miasa ihany koa izahay amin'ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra sy ny fiaraha-monina, izay miasa mba hampisy ny fahalalana sy ny siansa ho azon'ny rehetra. Manitatra hatrany ny tamba-jotra fiaraha-miasa izahay ary miarahaba an'izay rehetra manampy anay hiantohana ny vokatra ampiasain'ny tantsaha amin'ny fiarovana ny voly sy ny tontolo iainana.
Mpanolotra voalohany ny fiarovana azo antoka, sariaka, fiarovana ny vokatra ary vahaolana amin'ny fanatsarana ny tsenan'ny fambolena sy ny mpanjifa manerantany.
Oro Agri International Ltd (eo ambanin'ny marika ORO AGRI) dia mamolavola sy manamboatra vokatra misy patanty ho an'ny fampiharana fambolena, trano ary indostrialy manerantany. Manokana ireo vokatra azo antoka ho an'ny mpampiasa sy ny tontolo iainana izahay ary hanome vahaolana mandaitra nefa mbola mitoetra ho an'ny mpanjifanay.
Ireo roa ireo, ny fidirana amin'ny tsena sy ny vokatra dia nivelatra ary misy ankehitriny any amin'ny firenena fito amby valopolo manerantany.
ORO AGRI Group dia manamboatra kaontinanta efatra samy hafa miaraka amina ozinina any Etazonia, Brezila, Afrika Atsimo ary Portugal izao.
ORO AGRI Group dia manana teknolojia manana patanty maromaro. Ny fikarohana ataonay dia mifantoka hatrany amin'ny fitadiavana fampiharana vaovao ho an'ny teknolojia.
Safidio ny fizarana any amin'ny firenena maherin'ny 85 manerantany. Mpivarotra na mpivarotra mihoatra ny 2,000+ mivarotra vokatra ORO AGRI manerantany. Mpiasa 180 miorina amin'ny firenena 23 mahery.
Ekipa mpanohana ny R&D sy ny serivisy teknika monina any Afrika Atsimo, Brezila, Etazonia ary Eropa. Laboratoara famolavolana sy fampandrosoana any Portiogaly, Brezila, Afrika atsimo ary Etazonia.
Fanavaozana amin'ny fikarohana
Izahay dia mamolavola sy manamboatra vokatra misy patanty ary manampahaizana manokana amin'ny vokatra azo antoka ho an'ny mpampiasa sy ny tontolo iainana ary manome vahaolana mahomby nefa residue malalaka ho an'ny mpanjifanay.
Siansa Powered By Nature®
Konferansa Global BioControl Global 2021
Mampiditra OROBAC ™ 100
Fanoratana / fahazoan-dàlana vaovao
OROMATE K26® nahazo alalana tany France avy amin'i ANSES
Copyright 2021 © ORO AGRI Europe. Zo rehetra voatokana.
Mampiasa cookies izahay hanomezana anao traikefa fitetezana tsara kokoa, handinihana ny fivezivezena amin'ny tranokala ary hanaingoanao manokana ny atiny. Vakio ny fomba ampiasantsika cookies sy ny fomba ahafahanao mifehy azy ireo amin'ny alàlan'ny fanindriana ny "Privacy Preferences." Raha manohy mampiasa an'ity tranonkala ity ianao dia manaiky ny fampiasanay ny cookies.
Cookies Analytics sy Customization
Misaotra anao mitsidika ny tranokala ORO AGRI ary manadihady ny politikanay momba ny fiainana manokana. Tsotra ny politikanay momba ny tsiambaratelo: tsy manangona fampahalalana manokana momba anao izahay rehefa mitsidika ny tranokalanay hafa ankoatry ny adiresy IP alefanao mba hitondrana anao any amin'ny tranokala manokana momba ny vokatra. Atao hahasoa anao ity. ETO NY FOMBA FOMBA FANONTANIANA ANAY momba ny fitsidihanao ny tranokala eto aminay: Fampahalalana nangonina ary notehirizina ho azy Ny mpizara tranonkala ORO AGRI dia tsy manangona na mitahiry fampahalalana tsy misy dikany ho an'ny fangatahana http voaray. Na izany aza, ekenay ny adiresy IP anao hamongorana mpampiasa iray manana fahefana manokana amin'ny pejin-tranonkala mifanaraka amin'izany. Ny mailaka nalefa tany amin'ny ORO AGRI dia raisina amin'ny kaonty mailaka ao anaty boaty mifandraika amin'ny info@oroagri.com na legal@oroagri.com fa tsy voatahiry ao amin'ny mpizara tranonkala mihitsy. Fampiasana Cookies maharitra sy teknolojia fanarahan-dia Tsy mampiasa mofomamy maharitra na teknolojia fanaraha-maso maharitra izahay, toy ireo ampiasaina amin'ny fanaingoana ny session ho an'ireo mpitsidika miverina, ao amin'ny tranonkalantsika. Rehefa vita ny fotoam-pivorianao dia tapitra ny cookie. Raha manana fanontaniana na olana ianao dia mifandraisa aminay amin'ny adiresy mailaka legal@oroagri.com
Ilaina mafy ireto cookies ireto mba hanomezana anao tolotra misy amin'ny alàlan'ny tranokalanay sy hampiasa ny sasany amin'ireo endriny, toy ny fidirana amin'ny faritra azo antoka. Satria tena ilaina tokoa ireto cookies ireto hanaterana ireo tranokala, tsy azonao atao ny mandà azy ireo raha tsy misy fiatraikany amin'ny fomba fiasan'ny tranonkalantsika. Azonao atao ny manakana na mamafa azy ireo amin'ny alàlan'ny fanovana ny toerana fitetezana azy, araka ny voalaza eo ambanin'ny lohateny "Ahoana no hifehezana ny cookies?" ao amin'ny Cookie Statement.
gdpr [allow_cookies], gdpr [accept_types], wc_cart_hash_ #, wc_fragments_ #
Ireo cookies ireo dia manangona vaovao izay ampiasaina amin'ny endriny agregate mba hanampiana anay hahatakatra ny fomba fampiasana ny tranonkalantsika na hanampiana anay hanamboatra ny tranokalanay ho anao hanatsarana ny zavatra niainanao.
_ga, _gat, _gid, manangona
Ity cookie ity dia ampiasaina handefasana angona amin'ny Google Analytics momba ny fitaovan'ny mpitsidika sy ny toetrany. Manaraka ny mpitsidika manerana ny fitaovana sy ny fantsom-barotra. Ity cookie ity dia ampiasaina hanamboarana ireo hafatra dokam-barotra mifandraika kokoa aminao sy amin'ny zavatra mahaliana anao. Izy io koa dia manatanteraka fiasa toy ny fisorohana ny doka mitovy tsy hiseho tsy tapaka, hahazoana antoka fa aseho tsara ny doka, ary amin'ny tranga sasany dia misafidy dokam-barotra mifototra amin'ny tombontsoanao.
r / manangona